3D Iphrinta intambo
Toner Ukuze Canon
Toner Ukuze Dell
Toner Ukuze Epson
Toner Ukuze HP
Toner Ukuze Ricoh
Toner Ukuze Lenovo
Toner Ukuze Panasonic
Toner Ukuze Samsung
Toner Ukuze Toshiba
Toner Ukuze Xerox
Uyinki Ukuze Canon
Uyinki Ukuze Epson
Uyinki Ukuze HP
Uyinki Ukuze Lexmark
Uyinki Ukuze Samsung
imishini yokukopisha Toner
Aurora imishini yokukopisha
NakuMfoweth imishini yokukopisha
Ukuze Canon imishini yokukopisha
HP imishini yokukopisha
Ukuze Konica Minolta imishini yokukopisha
Ukuze Kyocera imishini yokukopisha
Ukuze Oki imishini yokukopisha
Ukuze Panasonic imishini yokukopisha
Ukuze Ricoh imishini yokukopisha
Ukuze Samsung imishini yokukopisha
Ukuze imishini yokukopisha Cijela
Ukuze Toshiba imishini yokukopisha
Ukuze Xerox imishini yokukopisha
3D intambo Isixazululo
Iphrinta Consumables Isixazululo
Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. Njengomunye nomkhiqizi emhlabeni professional ehlukahlukene yasakazwa ka iphrinta okudlekayo futhi zasehhovisi, sithatha nokuziqhenya okukhulu ekudaleni imikhiqizo innovative kakhulu futhi zisebenza kahle. Izidingo Office kukhona okukhulu sizibophezele lokuhlangana wabo.
TIANSE yiyona brand esemqoka zasehhovisi ngaphansi banner Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. It izici izindleko-ukusebenza, bomklamo, imibala ezicebile futhi ukukhetha ezihlukahlukene. TIANSE brand ongene ngokusemthethweni emakethe kusukela 2014, onguchwepheshe ehhovisi zokunyathelisa okudlekayo, okuyinto kuthengiswa Tmall.com, JD.com kanye nezinye izingosi e-commerce. Kuye ngokushesha ube ayethanda ukuphrinta okudlekayo umphakeli brand yasekhaya e-commerce emakethe.
Nge isisekelo ukukhiqizwa esehlanganise 35,000 square metres e Huizhou, emafektri ezinhlanu ezinkulu eChina ngenhloso Imininingwane nendawo yokugcina izincwadi kuze kube 10,000 square metres, 193 professional kwamakhasimende izikhungo kanye ezingaphezu kuka-2,300 Izitolo wokubambisana lonke, inkampani kungaqinisekisa ukulethwa fast and sisigcine futhi unikeze amakhasimende emva-sales service professional futhi abe nokucabangela, ngoba siqaphela ngempela eyodwa-stop service.
R Namandla & D Capability
Nge uchwepheshe R & D Ithimba, sikubheke kakhulu emisha kanye nomklamo. Sazisa imibono creative futhi ezilwela ukwenza emisha kanye nentuthuko ngemikhiqizo yethu.
Nge ocebile umkhakha nakho futhi esiqinile ukulawula izinga inqubo, sigxile kulokho esikwenzayo futhi wenze kutibopha ukuqinisekisa amakhasimende ethu kuphela ukuthola imikhiqizo esezingeni lomhlaba.
Nge esitebeleni supply ngamaketanga, umqondo ikhasimende ngamakhasimende kanye kwamakhasimende iqembu lochwepheshe, sinikeza wonke-emhlabeni futhi ecabangela pre-ukudayiswa, e-ukudayiswa nangemva-ukudayiswa amasevisi wonke amakhasimende ethu sonke isikhathi.